पत्रकार महासंघको निर्वाचन आज : कसले मार्ला बाजी ? - Kantipath.com
पत्रकार महासंघको निर्वाचन आज : कसले मार्ला बाजी ?
नेपाल पत्रकार महासंघको आगामी तीन वर्षे कार्यसमितिका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको झण्डै ७ दशकको इतिहासमा पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेतृत्व चयन हुन लागेको हो ।
महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमात्र होइन, प्रदेश, प्रतिष्ठान, एसोसियट र जिल्ला शाखाहरुको नेतृत्वका लागि पनि आजै मतदान हुनेछ । महासंघले भ्रममा नपरी आफूले मतदान गर्न पाइनेहरुलाई मात्र मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । मतदान आन विहान ९ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म हुनेछ । देशभरबाट १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
महासंघका पदाधिकारी र सदस्यलाई देशभरका सदस्यले मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक प्रदेशका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा सदस्यता भएकाले मात्र पाउनेछन् । उपत्यका, एसोसियट र प्रतिष्ठानमा सदस्यता हुनेले केन्द्रका बाहेक आआफ्नो प्रदेशका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै उनीहरुले आआफ्नो प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्न पाउँछन् ।
जिल्ला, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा मतदान स्थल तोकिएको छ । उपत्यकाको हकमा प्रतिष्ठान, उपत्यका र एसोसियटका लागि छुट्टाछुट्टै मतदानस्थल छ । महासंघको चुनाव सहज र मर्यादिन रुपमा सम्पन्न गराउन महासंघले केन्द्रीय पदाधिकारीलाई सबै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल प्रेस युनियन र नेकपा माओबादी केन्द्र सम्बद्ध प्रेस सेन्टरको संयुक्त गठबन्धमा विपुल पोखरेल अध्यक्ष र रोशन पुरी महासचिवको उम्मेदवार छन् । महासंघका वर्तमान महासचिव रमेश विष्ट यो समूहमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार छन् । यो समूहमा एशोसियट सचिवमा पवन आचार्य छन् ।
अध्यक्षमा गजेन्द्र बुढाथोकी पनि चुनावी मैदानमा छन् । राजनीतिक आस्थाभन्दा बाहिर स्वतन्त्र हैसियदमा उम्मेदवारी दिएका उनीप्रति पनि स्वतन्त्र पत्रकारहरुको साहनुभूति हुन सक्छ ।
नेकपा एमाले सम्बद्ध प्रेस चौतारीले निर्मला शर्मा अध्यक्ष र बालकृष्ण बस्नेत महासचिवको उम्मेदवारका रुपमा प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएको छ । यो समूहमा माधव नेपाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार छन् ।
Previous Previous post: १६ वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ
Next Next post: चुनावमा आफ्नो स्थिति के हुने भन्दै ओलीको गोप्य सर्वेक्षण : आयो यस्तो नतिजा
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ नवलपुरले नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालयमा ताला
आज आमनिर्वाचन : प्रभावशाली ३ नेता, चौथो हुन सक्छन् ‘किङ मेकर’
अपडेट : कर्णाली नदीमा बेपत्ता यात्रुको पुत्ला बनाएर अन्त्येष्टि गरीयो
विजयविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि काँग्रेसको आकस्मिक बैठक